About Us - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co, Ltd
Zhejiang Shuanglin Jiate Teknolojia Teknolojia, dia alain'ny Aluminium Sheet, Aluminium Foil, Aluminium strip sy Aluminum coil factory, izay an'i Jinding Aluminum Industry Group, izay nametraka tamin'ny volana Septambra 1997, manangana sampana toy ny Hangzhou Jinding Industry Industry Co., LTD , Qinghai West Aluminum industrie Co, Ltd., Henan Zhongji Aluminum Foil Co., LTD, Hangzhou Jinding Aluminum profile Co., LTD.
Manana milina toy ny tohodrano, miloko mafana, mangatsiaka mangatsiaka ny Jinding Aluminum Industry Group ahitana ny fikarohana alim-bary sy ny fampandrosoana, ny famolavolana, ny famokarana ary ny varotra ivelany, dia nampidirin'ny Hongkong Jinding International Group. Ny Jinding Alumin Group dia niorina tamin'ny volana septambra 1997, fametrahana sampana toy ny Hangzhou Jinding Aluminum Industry Co., LTD, Zhejiang Shuanglin Jiate metatra teknolojia CO., LTD, aliminya aluminium Qinghai aluminium co, Ltd., Henan Zhongji aluminium Foil Co., LTD, Hangzhou Jinding aluminie profilà co, LTD.lling sy ny foil mandroso ho an'ny fangatahana maoderina avoakan'ny siansa sy teknolojia, ary ny milina fanaraha-maso imported avy any Alemaina. Manana milina famokarana miloko marevaka miaraka amin'ny width 2500mm, milina mangatsiaka mangatsiaka roa miaraka amin'ny width 1800mm, milina matevina matevina amin'ny sakan'ny 1650mm, vita amin'ny milina matevina amin'ny 1600mm, 8x20T voasintona, milina mihenjana, miloko milina ary fitaovana madio. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny alimo, ny alim-bary, ny alim-biriky, ny alim-boaloboka ary ny dingan-dipoavatra, ny alim-bary ho an'ny indostria, ny biriky aluminium ho an'ny tariby tariby sy rano, fanaka fanaka, haingon-trano, kodiarana aluminium ho an'ny cookware. Manana milina mivezivezy goavam-be roa misy milina 2500mm sy milina mifandraika izahay. Manaraka ny teknolojia avo lenta kokoa izahay hamokarana vokatra alimo, izay ahafahana miantoka ny kalitaonay.
Hatramin'ny nanorenana ny orinasa, ny ZHEJIANG SHUANGLIN JIATE METAL dia nitazona ny fitsipika "tsara kalitao sy serivisy tsara", ny fomba "fitantanana tanteraka" sy ny tanjona "manatsara ny tenantsika, ny fampivoarana ny tsena". Nanana ekipa matihanina matanjaka izahay, nanangana rafitra fanaraha-maso feno ary tsara ny fanamarinana kalitao ISO9001 amin'ny 2000. Mandritra izany fotoana izany, dia efa naharitra ela ny fifandraisana ara-barotra nifanarahana tamin'ny mpanjifa vahiny maro samihafa.
Ny famokarana vokatra vita amin'ny alim-pandaharana voalohany karazana amin'ny asa ataontsika, manana finoana matanjaka amin'ny finoantsika, manolotra serivisim-pahombiazana ho an'ny fenitra ho antsika, isika Jiate Metal dia hanohy hanompo mandrakariva ho an'ny mpanjifa maneran-tany.